Iziphumo zombhalo ze-35 CSS kwiwebhusayithi yakho yonke imixholo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sele sipapashe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uthotho lweempembelelo zombhalo zeCSS ze ukuphucula ukuboniswa kwesihloko se-H2 yemveliso okanye isihloko sokungena kwenkonzo ethengiswa kwiwebhusayithi yomthengi. Iziphumo zombhalo zeCSS ezikwaziyo ukunika inqanaba lomgangatho esijonge kuwo ukuze sibonise umdla kumthengi kwaye anazo kwiphothifoliyo yakhe ixesha elide.
Sibuya nolunye uluhlu olukhulu lweempembelelo zombhalo zeCSS ezinikezelwe ngokukodwa ukubonisa iwebhusayithi ngendlela ebalaseleyo. imveliso, inkonzo, iphepha lokufika okanye olunye uhlobo lomxholo. Iziphumo zombhalo ezingama-35 ongenakuphulukana nazo ukubonisa ukuba uyilo lwewebhu namhlanje lukwelona nqanaba liphezulu kwaye asinakuphuthelwa kuloliwe ukuze siqhubeke nobuhle be-aesthetics.
1 Cwaka isiphumo sombhalo bhanyabhanya
2 Ukungeniswa kokubhaliweyo kweCSS
4 Umbhalo wesithunzi ophilayo
5 Umbhalo weMorph
6 Yahlula isiqabu sombhalo
7 Oopopayi bamaza
8 Umbhalo we-warp oopopayi
9 Umphumo womsi
10 Isiphumo seblue
11 Umbhalo wokugcwalisa oopopayi
12 Umbhalo oopopayi kwiCSS nakwi-HTML
13 Ukuzoba okubhaliweyo ngombala
14 Isicatshulwa esinyanzelisiweyo kwi-SVG
15 Umbhalo wesithunzi
17 Isiphumo sokuqhuma
18 Isiphumo sokubhaliweyo kwamaza
19 Oopopayi be-GSAP
20 Umbala ophilileyo wokubhaliweyo
21 Isiphumo sokubhaliweyo esingenakwenzeka
22 Isicatshulwa esimibala-bala sigcwalisa nge-SVG
23 Isicatshulwa esinyanzelisiweyo kwi-SVG
24 Umbhalo we-Glitch
25 Umbhalo we-Glitch
26 Glitch isicatshulwa SCSS
27 Umbhalo wokuhambisa phezulu
28 Ukuhambisa isicatshulwa ngokwembono
29 Isicatshulwa esigqamileyo sopopayi
30 Isicatshulwa esimnandi
31 Umbhalo we3D ekwakhiweni
32 Isicatshulwa esinyulu seCSS kwisithunzi
33 Isithunzi esihle
34 Isithunzi sesibini
35 IParallax Shadow
Cwaka isiphumo sombhalo bhanyabhanya
Isiphumo sokubhaliweyo esithile esiboniswe njengesigqibeleleyo sodidi oluthile lomxholo. Kwicatshulwa kungaboniswa ukuyenza icace gca into yokuba sinikela ingqalelo kuyilo lwewebhusayithi yethu okanye leyo yomthengi.
Ukungeniswa kokubhaliweyo kweCSS
Oku kungeniswa kokubhaliweyo kwe-CSS kuzama ukwenza ngokungathi kunjalo Imfihlo yesitshixo. Indlela ebabazekayo yokubonisa isicatshulwa kwiwebhusayithi ezinikezelwe kwisihloko esithile.
Umbhalo wesithunzi ophilayo
Yahlula isiqabu sombhalo
Oopopayi be-Wave ngaphakathi kokubhaliweyo kunye ne-SVG. Elinye lawona manqaku anomdla woku Isiphumo sokubhaliweyo sikumfanekiso ongasemva kunye negradient egcwalisa iliza ukuze ibonakale kakuhle.
Umbhalo we-warp oopopayi
Iziphumo zombhalo wejQuery esibonisa indlela yokuyila Iziphumo zeblue kwintloko kwi-HTML. Iziphumo kukwenza amaqamza avele ngasemva kokubhaliweyo ngokungathi ngamanzi abengezelayo. Ukubetha kakhulu.
Umbhalo wokugcwalisa oopopayi
Umbhalo oopopayi kwiCSS nakwi-HTML
Ukuzoba okubhaliweyo ngombala
Apha isicatshulwa sizotywe kunye umphumo wombala oqaqambe kakhulu kwaye loo nto inokunika inqaku kwimicimbi enxulumene nokufikisa okanye ulutsha. Ekugqibeleni ayinanto, ngelixa ifonti ihanjiswa ngothotho lweethoni ezinamandla.
Isicatshulwa esinyanzelisiweyo kwi-SVG
Isithunzi salo mbhalo sivelisa i ukusebenza nzulu ngemibala eqaqambileyo ephantse yabonakala ngathi yivenkile ethengisa ukutya. Isiphene kuphela kukuba ayilungiswanga kwizixhobo eziphathwayo.
Oopopayi kwiCSS kunye ne-HTML ezibonisa ubuqambi bayo kunye nezinye imibala esusela kumbala otyheli nobomvu. Ukusetyenziswa okumiselwe bubodwa boopopayi bayo bezo mibala zihamba ngokuzoba okubhaliweyo.
Isiphumo sokubhaliweyo kwamaza
Njengakwimiboniso bhanyabhanya emininzi, zonke iileta ezenza umhlathi ziya kuvela kuyo yonke indawo ukuze ekugqibeleni zenze izivakalisi ngempembelelo enkulu yoopopayi. Igudile kakhulu kwesinye seziphumo ze okubhaliweyo okutsala amehlo kunye nomgangatho ophezulu kuluhlu lonke. Kubalulekile ukuyigcina engqondweni kwiindidi ezithile zemisebenzi yabathengi.
Umbala ophilileyo wokubhaliweyo
Isiphumo sokubhaliweyo esingenakwenzeka
El ibhokisi ebomvu ejikeleze isicatshulwa iyaziphendulela ngesiphumo somthunzi esigubungela igama okanye ibinzana. Inomtsalane kakhulu kwaye inomdla omkhulu wokugubungela ukungena okanye i-header yewebhu ngobuhle.
Isicatshulwa esimibala-bala sigcwalisa nge-SVG
Imulticolor gcwalisa oopopayi enikezelwa njengenye yezo Iziphumo zombhalo ezivelayo ngokwayo. Ikhethekile kuluhlu kwaye inezo zinto zichukumisayo zebombastic eziza kubangela uvakalelo kubakhenkethi bewebhu. Ukuba uyakwazi ukubeka, uya kunika inqaku.
Njengokuba indlela eya kuye yayipunyiwe Umzobo oqaqambileyo wombhalo weSVG. Enye yezona zinto zinomdla kakhulu kuloluhlu kwaye zibekwe kwindawo yazo ukuzichonga ngokugqibeleleyo.
Njengokuba bekukho ukuphazamiseka kumqondiso wokuba zoba isicatshulwa okanye usibonise, Esi siphumo sombhalo sisiphelo esihle. Isinye ngaphandle kwamathandabuzo kwaye siyazibonakalisa. Yenziwe nge-HTML (pug) kunye neCSS (SCSS).
Glitch isicatshulwa SCSS
Esinye isicatshulwa se-glitch esinokuphazamiseka indawo yakho eya kuyifumana kwiwebhusayithi ethile ngenxa yomxholo, ngokuqinisekileyo ezinxulumene neentsomi zesayensi.
Umbhalo wokuhambisa phezulu
Ukuhambisa isicatshulwa ngokwembono
Xa sibeka Isalathiso se mouse ngapha kokubhaliweyo, iya kuhamba ngombono onomdla ohambisa isiphumo se-3D.
Isicatshulwa esigqamileyo sopopayi
Umbhalo we3D ekwakhiweni
Esinye isiphumo sokubhaliweyo se-3D se hamba uyila amagama ahlukileyo koonobumba bonke eziza kuvela ngokudibeneyo zisondeziwe ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi. Iziphumo ezinkulu kunye nokubonwayo kunye nokuboniswa. Enye icetyisiwe kuluhlu.
Isicatshulwa esinyulu seCSS kwisithunzi
Iziphumo zombhalo kwi-CSS emsulwarovoke isithunzi sesiphumo esihle kunye nesimbo esihle. Ayinakuphikiswa kwaye enye yezona zinto zibalulekileyo kuluhlu. Akukho popayi, kodwa iyakhazimla.
Iziphumo zesithunzi ezibonakala zintle ngokwenene. Ukugqibelela kwamaphepha okufika okanye iiwebhusayithi zokhathalelo lwemini. I-CSS emsulwa ukuzimela yodwa.
Omnye umphumo omkhulu wesithunzi kwi I-HTML kunye ne-CSS ebonakalayo iyodwa. Isithunzi kwimigca senza ubuhle obukhulu kwiiwebhusayithi ezithile ezinomxholo.
Siphelisa uluhlu olunye yezona mpembelelo zihle kakhulu kwi-parallax isithunzi esenziwe ngumbhalo. Sidlulisa isikhombisi semouse kwaye siye ngasekunene, kokukhona kuya kubonakala isithunzi. Ibhalwe nguRact, ES6 kunye neBhabheli.
Unolunye uluhlu lwe Iziphumo zombhalo apha.